Wax ka qabashada arrimaha taboosaarka ah iyadoo la adeegsanayo raadiyaha - "Wadahadalka Saaxiibkeyga Ugu Wanaagsan" - Equal Access International
Dhageysiga barnaamijkaaga oo aan dhex marayo buugyaraha aad ii soo dirtay, waxaan dareemay isbeddelo badan noloshayda. Si aan u xaliyo dhibaatooyinkeyga soo socda, waxaan ku dhex maraa buugyaraha xirfadahayga noloshayda waxaanan ogaadaa sida aan ugu guuleysan karo una kala saari karo xaqa iyo baadilka. Kaliya ma xalin dhibaatooyinkeyga laakiin waxaan sidoo kale isku dayay inaan xalliyo dhibaatooyinka ka dhex dhaca asxaabteyda. Waxaan siiyay buug-yaraha aan idinka helay saaxiibbaday sidoo kale waxaan la wadaagay istiikarada. Waxay dhahaan barnaamijka "Saathi Sanga Manka Kura" wuxuu saameyn weyn ku yeeshay nolosheena iyo qaabkeena fekerka sidoo kale. "
- Laga soo qaatay Warqad Dhageyste
Toddobaad kasta, in ka badan 7.2 milyan oo dhalinyaro ah oo ku nool Nepal ayaa u jeesta asxaabtooda barnaamijka raadiyaha Wada Hadalka Saaxiibkeyga Ugu Fiican (Saathi Sanga Manka Kura), kana dhigaysa mid ka mid ah shanta barnaamij ee idaacadaha ugu caansan dalka. Barnaamijkan wuxuu awood siinayaa dhalinyarada inay siiyaan macluumaad muhiim ah oo kusaabsan caafimaadka, nolosha, fursadaha dhaqaale, iyo xirfadaha nolosha aasaasiga ah si ay ula tacalaan dhibaatooyinka adag ee ay kala kulmaan nolol maalmeedkooda.
Dhallin-yarada marti-ka-ah wada-hadalka furan ee dhallin-ya-da-dhalinyaro ee hawada ku saabsan xaqiiqada iyo mas'uuliyadaha qaan-gaarnimada waxay ka caawiyeen dhalinyarada inay ka kacaan khilaafaadka maalinlaha ah, filasho qaldan, iyo cadaadiska asaaga. Dhagaystayaasha dhallin-yarada - badiyaa oo aan haysan ilo kale oo macluumaad lagu kalsoonaan karo - baro xirfadaha gorgortanka ee xiriirka, sii wadida waxbarashadooda, ka hortagga HIV / AIDS, STDs, uurka ka hor guurka, tahriibinta, tababarka xirfadaha, iyo la shaqeynta arrimaha la xiriira iskahorimaadka Nepal iyo soo celinta nabadda. .
Mid kasta oo ka mid ah wargeysyada toddobaadlaha-usbuuclaha ah wuxuu iftiimiyay sheekada kureyga yar ee la halgamaya arrimo gaar ah sida midab-kala-sooca ama cunsuriyadda, waxbarashada gabdhaha, isku dhaca, caafimaadka galmada iyo taranka, ama shaqooyinka. Wadahadalka udhaxeeya martigaliyayaasha, riwaayadaha gaagaaban, iyo wareysiyada lala yeelanayo khubarada, dhageystayaashu waxay helayaan aqoon iyo taageero ay ku gaaraan go'aano xog ogaal ah.
Waxaa dhiirrigeliyay bandhigyada raadiyaha, naadiyada dhageysigu waxay sidoo kale qabtaan howlahooda u gaarka ah, sida tababarka iyo ka-hortagga HIV / AIDS, ama barnaamijyada ku saabsan takoorka jinsiga iyo kala-soocidda ganacsiga iyada oo lala kaashanayo xarumaha caafimaadka ee maxalliga ah iyo guddiyada horumarinta tuulada. Naadiyadan waxay tusaale u yihiin sida dhalinyarada reer Nepal ay si togan ugu beddelaan dhaqankooda si ay caafimaad ugu noolaadaan iyo nolol wax soo saar leh.
Naadiga 'Indreni Bal Club' ee ka soo jeeda bariga Nepal waxay ahayd geesinimo ku filan si ay u bilaabaan olole ay xubnahoodu da 'yar ku kicinayaan sheekooyinka aan rasmiga ahayn ee goobaha dadweynaha, sida joogsiyada basaska iyo ilaha biyaha dadweynaha, arrimaha la xiriira sida galmada aaminka ah, muhiimadda caafimaadka taranka, iyo mowduucyada kale ee ay ka barteen ka sheekaysiga Saaxiibkeyga Ugu Fiican. Shabakada naadiyada dhagaystayaasha waxay bilaabeen daabacaadda joornaalada gobolka iyo joornaalada qaranka si kor loogu qaado nashaadaadka naadiga badan ee laga fuliyo dhamaan Nepal.
"Dad badan oo ku nool dalkeenna xitaa ma ogaanayaan waxa uu yahay Aids-ka. Xitaa waligood ma aysan maqal. Marka sidee ayaan uga fileynaa inay ogaadaan wax ku saabsan tallaabooyinka amniga?"
Waraaqaha waxaa la helay sanadkii 2005 oo keliya
Dhallinta Nepalese (ka yar 29) ayaa raacay barnaamijka
naadiyo si rasmi ah loo abaabulay oo dalka oo dhan ah
Joornaalka hore ee 'USAID' Frontline Magazine (2008, p. 7)
"Wada sheekaysiga Asxaabteyda Ugu Fiican" Qaybta
Halkan ka soo dejiso raadiyaha xirmooyinka
Ka taageer EAI abuurista tusaalo nololeed oo dheeri ah oo ay sameyso iyo dhalinta.